Indlela uvuke ekuseni futhi ulala ngokwanele? Indlela ukuqeqesha ngokwakho abavuke ekuseni bephuthuma?
Iwusizo sivuke. Lokhu ibikwe sematheni manje yisikhathi. Tutorials abantu yimpumelelo kangakanani ziqala usuku ngehora lesihlanu ekuseni, abaningi. Kodwa umbuzo uwukuthi hhayi kuphela indlela ngivuke ulala ngokwanele, futhi kungaba nhlobo kudingekile? Lesi sihloko sizosisiza ukuxazululwa nale nselele, futhi wona wodwa.
Lesi sigaba samanje umphakathi
Esikhathini esithile emphakathini ekusithekeni ukusungula amalungelo abo bonke abantu ukuba bahlanganyele enkonzweni "izikhova" futhi "larks". Eyokuqala, ngokulandelana, izinyoni ebusuku, futhi kamuva ngosuku zivuka, kuyilapho yokugcina - izinyoni ekuseni ngokusobala. Yiqiniso, into kuwo. Kodwa ingabe lokhu kusho ukuthi umuntu ovunyelwe embhedeni ngaphambi nambili?
Uma esizithatha kalula ukuzisholo kwazo ukuthi kuyingozi ukuba nomzimba onempilo (nangenxa okungenamsoco ngisho ngakho ngaphezulu), khona-ke impendulo Yiqiniso, omubi.
Kodwa Axiom - kukhona okuhlukile, ngakho kungcono kakhulu ukuba acabangele ubufakazi.
Kungani ukusheshe sivuke?
Lonke uhlobo emhlabeni kungaphansi kwethonya kwelanga. Kulula ukuqaphela ukuthi imisebe yokuqala izinkanyezi ezikhanya ayaqala ukuba uvuke uphila - yingakho, izinqubo emzimbeni womuntu nayo isebenze endaweni ethile emhlabeni kwelanga.
Uma kusebenze kwenzeka ngesikhathi sokulala, sikhule size sibe inqubo engelapheki. Lokhu kuholela yempilo ebuthaka.
Imiphumela ngivuka ngasekupheleni
sokukhetha iseli evamile;
uhlelo hormone enempilo.
umdlavuza - iseli umdlavuza.
Imiphumela ngivuka ekuseni
ukuzinza isimiso sezinzwa;
encishisiwe ezifweni ukucindezeleka, ukucindezeleka, nokunye. d.
"Izikhova" futhi "larks" - iqiniso noma amanga?
VM Kovalzon kuqinisekisa ngemuva yesayensi ukuvela kuhlukanise abantu kule "izinyoni" ekuseni khulu, ngemuva kwesikhathi - kuyinto yofuzo. Ngesikhathi esifanayo, ngokusho kwakhe, esamanje inombolo labantu ngubani iziveze uhlobo oluthile - akuyona isegazini "Owl" / "larks" futhi retrained.
On ubuthongo ku ijubane yesimanje yokuphila kakhulu ukuthonywa yokucindezela igrafu yomphakathi, ukuzikhethela okhokhelwayo. Ngokwesibonelo, bonke abadlali - isikhova, nodokotela - larks.
yofuzo iyindlala, Nokho, futhi wathola siqala iphesenti ezincane. Real "Izikhova" umyalelo mayelana nendlela ngivuke ngokwanele musa asize.
Isikhathi yokutakula ekuseni
Iningi liphefumulelwe ukwanda ekuseni kakhulu sokweluleka bonke abanye uvuke ekuseni, kodwa ngezikhathi ezithile zonyaka kungaba futhi 4-5 ekuseni. Okwazi sezakhiwo ezinjalo akupheleli lapho. I enhle angabhekwa esifanayo ngo-6 ekuseni. Akuyona imfuneko, kodwa noma kunjalo, ukwanda kufanele kube kungakapheli ayisishiyagalolunye. Kodwa ukuqeqesha ngokwakho abavuke ekuseni bephuthuma? Yini ukusetshenziswa, uma i-alamu nilimaza ngesikhathi esifanele, futhi umzimba namanje umelana?
Kuvele mazwi athakazelisayo
Lo mkhuba ukuthi izinkinga ne kuyanda ekuseni ungazizwa abantu bejabule futhi benethemba lokuhle. Bathanda kuleli zwe. Engafuni ukuchitha isikhathi ngomzuzu kwesikhathi ukuphupha bafisa, ukusheshe sivuke ukuze leso sikhathi futhi bachitha usuku lonke ngendlela enenzuzo futhi kube nezithelo. Ingabe lo akuyena yini isihluthulelo sempumelelo?
Indlela uvuke ekuseni?
Okokuqala, yayiyindawo lokhu kusikisela ukuthi lula kuyanda, isimiso, futhi ngempela kuyinto umkhuba omuhle:
Pholisa ekamelweni ngaphambi kokulala;
ewusizo njengoba umoya oqabulayo - sukuma uhambe, iya emphemeni, noma ngisho bheka ngefasitela ovulekile futhi ngima lapho imizuzu embalwa;
ulale kungakapheli eziyishumi noma nanye ebusuku, umnqamulajuqu - ayihlali kuze kube phakathi kwamabili.
"Sahlangana cool ekuseni!"
Amathiphu zendlela uvuke ekuseni:
umculo, emi-alamu akufanele ibe phezulu futhi kungazelelwe - ushintsho olunjalo kusukela ekuseni Luyogcizelela emzimbeni, kunalokho, kungcono ukubeka ezolile, imisindo emnandi, mhlawumbe, zabuna ezingokomoya noma izwi sublime;
ungakwazi ukuxoxisana ukusheshe sivuke ekuseni omunye - umuzwa wokuba nomthwalo wemfanelo ukusiza;
Izikhungo nigqoke komunye umkhawulo Igumbi - ngakho kuyodingeka uvuke ekuseni okungenani, ukuze uyivale.
Kanjani ukuze ufunde ukusheshe sivuke? Hhayi lutho ngoba umbuzo uwukuthi ngakho - "funda", "yokufunda", "isayensi". Lena into yesikhathi eside nge umbuso kosuku, kunokuba wesikhathi esisodwa isidingo. Ngakho-ke, kungase kukuzuzise iqhinga nge lelisu.
Sisebenzisa izindlela ezimbili eziyinhloko (khetha ukuthi like best / rezultativen):
ubuthongo futhi wake up nsuku zonke kumele kube ngesikhathi esisodwa futhi efanayo (kahle, okungenani eseduzane, iphutha akubhekwa kwemizuzu engu-10);
ukulalela umzimba wakho - uma efuna ukulala, sekuyisikhathi umhlaba amaphupho.
Eyesibili indlela kuhle kumuntu "izikhova" abaqeqeshiwe - nokulinda kuze kuhlwe naphezu lo mkhuba, umzimba uyaqhubeka ukusebenza ngokuvumelana iwashi oyizalayo. Kepha awulungele, "izikhova" kweqiniso. ke yini okumelwe uyenze? Njengoba Ngingavuka ekuseni?
Sisebenzisa amacebo ngokwengqondo
Kanjani ukuze ufunde ukusheshe sivuke? Uma amasu ngokomzimba ngesihluku kakhulu zisekhona iyasilela, sekuyisikhathi sokuba zengqondo.
Umgomo we "Ngibona umgomo - Angiyiboni izithiyo". Funda ngaphambi kokuthi kube lula uma ukuphila kuyigugu ukukwenza. Sidinga umuzwa, kudingeka umgomo, bese lutho kuyoba isithiyo endleleni eya i yokutakula ekuseni.
Thanda ukuphila futhi sengqondo usukumele, ukuziqinisa nokuba nombono oqondile.
Dream futhi ibhizinisi ozithandayo.
Ezemidlalo njengendlela ukuthonya isigqi wokuphila, ukuze silondoloze umzimba ithoni, ukuvumela umzimba ukuba babe ukhathele emini futhi kusihlwa ofuna okufudumele ubuthongo.
Motivation njengoba ukufakwa yangaphakathi kudingeka uqonde ukuthi ukuziqeqesha ukusheshe sivuke.
Ilindele ekuseni emnandi. Ake sikhathi ayihlobene ne ukucindezeleka, imizwa kanye migraine. Ufuna ukwazi ukuthi uvuke ekuseni? Kulula, uma umnandi. Vumela umsuka usuku Lihlobene nokubhekana ubuso kubekwe ikhofi elishisayo, elimnandi futhi okumnandi, kushelele cool, isimo into entsha, ukuqabula umuntu omthandayo. Ngempela, kuwo akafuni ukushintshanisa for iphupho!
Ukuzikhuza mayelana ukuthi benzeni kusihlwa. Ngokwesibonelo, incwadi - iholide, futhi i-TV - i vampire amandla, izingxoxo ezimnandi - ewusizo ezindaweni zokuphuza nasemibuthanweni at computer ukuxhumana nomphakathi - kunalokho.
Insomnia - isishayo emphakathini wanamuhla
Kanjani ukuze ufunde ngivuke ngaphambili ekuseni? Ukuze wenze lokhu, udinga ukulala. Futhi ukuze ubuthongo, lokhu kusho ukuthi inombolo ezanele okulala wathatha amahora. Futhi kudingeka uhambe ngokushesha. Bingo! ezibalulekile Ngakho, osuka embuzweni wethu wakuqala uwukuthi: "kanjani ukuya embhedeni ekuseni futhi uvuke ekuseni?"
Kunengqondo lula kunangaphambili - ngiziphoqe ukuba kudlule isikhathi kuze kube phakathi kwamabili ukubukela midlalo noma emsebenzini. Kodwa lapha izibani zivaliwe, uvale emehlo, isiseduze ingubo ngakho komqamelo, silale sonke akayi futhi ingahambi. Ngakho uya ihora noma amabili, kanye ezintathu. Iwashi cishe emihlanu ekuseni, ihora ukukhuphuka. Futhi lapha ukuze sivuke? Ingabe akukhona lokho nathi ukuya embhedeni - ke cishe iphendula.
Ngeshwa, lokhu isimo uba umthetho kunokuba ngaphandle. Futhi kubizwa ngokuthi ukuqwasha.
Izimbangela inkinga nendlela ukulwa naso
Zonke izimbangela ukuqwasha zingahlukaniswa zibe izingqimba ezimbili ezinkulu:
Kwengqondo. Lokhu ukucindezeleka, ukucindezeleka futhi sezinzwa ezibangela ukubhalelwa kuziphendulela ngefanelo, futhi ngezinye izikhathi inkinga enkulu.
ukukhathala kwengqondo. isisekelo salo ngokuya - Imininingwane glut, ingqondo isebenza kanzima, kodwa engaphumeleli, ezilahliwe okunomkhuhlane kwedatha zibukeka ke zinyamalale ekhanda, akukho kungenzeka ukwamukela noma inqubo alulusha, ingasaphathwa zokuhlunga.
Obonakala ungelutho izimbangela kwansuku ukuqwasha:
ngokuphazamisa elele izingubo, umbhede / ukhukho;
ukwamukelwa ngaphambi sokulala isiphuzo, lapho lwesakhiwo oluqukethe caffeine;
izici, izinzwa kuyacasula: ekukhanyeni okunamandla, umsindo omkhulu noma iphunga;
imikhuba emibi (utshwala nogwayi ibe nomphumela ongemuhle ubuthongo).
Njengoba singabona, ukuqwasha - phetho okuyinto kungenzeka ukuqeda kuphela ukuqedwa izimbangela. Ngakho-ke, kusukela uhlu ukhethe into efanele ngenhla.
izindlela Abantu sika ukususa ukuqwasha ngokuvamile infusions amakhambi, okuyilona elidingekayo ukuze baphuze ngaphambi sokulala. Lokhu kuba nomphumela omuhle ngempela abhekisele esimweni esasivamile. Amakhambi ezifana Mint chamomile athobe isimiso sezinzwa. Inenzuzo nabangenacala ngokuphelele kuthinta uju ngaphambi sokulala.
Yiqiniso, uma imbangela yokuqwasha sibucayi kakhulu, la mathuluzi musa asize, kubalulekile ukuba kudokotela. Kodwa lokhu Emacaleni angakajayeleki imbangela ikuyo yonke indawo manje ezweni lanamuhla - sadlala umzamo futhi Isikhathi esinikelweko ngokuya ngokumumethweko. Abantu emsebenzini bokusungula, ngokuvamile babonisa, ukusetshenziswa ikhofi kanye namandla iziphuzo isibindi, bese ayahlupheka ngoba abakwazi ukulala.
Kuwufanele ukukhumbula ukuthi umsoco ofanele nokulala ngokwanele - ezihlobene izinto, ngakho-ke futhi kuyadingeka ukuqapha futhi unempilo futhi ukudla okunomsoco.
Vuka ekuseni - ngubani akudingeki-ke?
Ngemva kokucabangisisa ngale amathiphu ewusizo ukutakula ekuseni ubuyele eziyisisekelo, kuya phezulu sihloko kanye neqiniso lokuthi izihloko yokuqala okukhulunywa.
Ngakho, i-division zibe "larks" futhi "izikhova" kanye neqiniso ezibalulekile ziqeqeshelwa (ikakhulukazi) nesamanje.
A Lark yangempela lesi siyalelo kwaba akudingekile. Ukuqeqeshwa - kuyafana sebevele (Nokho mhlawumbe nge nobunzima) baye kahle inqubo, ngivuka ekuseni.
Hlale 'izikhova ".
Wazi kanjani? Ngabe wena real "isikhova"
Ingqikithi "isikhova" awukona ukuthi ngeke angakwazi ukulala ebusuku. Mhlawumbe. Futhi isifiso ekhethekile bavuke ekuseni kakhudlwana. Inkinga ukuthi akudingekile. Ngaphezu kwalokho, kuyalimaza.
Ekuqaleni kwalesi sihloko kushiwo isigqi eziphilayo, ukuthi zemvelo iwashi lomzimba ulungise ukuhlala bephapheme sasemini futhi bangabeki ebumnyameni. Ngo "izikhova" konke kunalokho. Futhi ngokufana ncamashí "larks", uma ulala kuze 12 - onakalise impilo yabo, futhi kule "izikhova" kakhulu hhayi Kunconywa bophezela uvuke ngehora lesithupha ekuseni bese bebalekela impumelelo ezintsha.
izici eziningana 'isikhova ":
kungakhathaliseki ukuthi zingaki amahora ziye esichithwa ubuthongo, nokuthi kukhona umuzwa ubuthongo omuhle umuntu, engxenyeni yokuqala yosuku encishisiwe ukukhiqiza;
muzwa wokuziphatha ukuqala ibhizinisi kusihlwa - nomuzwa wokuthi kulesi sikhathi ongenza amandla ngokomoya;
lapho uzama ukuphila ngokwezindinganiso umbuso "Lark" emahoreni angu-22-23 umzimba ukhathele ufuna ukulala, kodwa ngesikhathi esifanayo kufika injabulo ezingeke ngokuthi ngesikhathi sasemini.
Kanjani ukuphila wangempela "isikhova"?
Ngeshwa, ezemfundo, futhi amahora ibhizinisi izikhungo ezisemthethweni iqala mayelana 8 - kakhulu ukuba kuhlalwe "izikhova", okuyinto abakwazi ulala ngokwanele, ngisho ngalesi sikhathi ukuthola ulwazi. Kodwa kukhona okunye okukhipha (ngokuya umsebenzi), isibonelo, freelancing, lapho isisebenzi yena ihlela isimiso sakhe. Freelancing angase afune abameleli nasemikhakheni efana intatheli, uMklami, iwebhu ne umklami graphic, umbonisi, Blogger.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukusebenza ebusuku - onogada kanye nabashayeli bamatekisi, futhi izinhlangano ezihlukahlukene, evulekile ubusuku nemini. Ngakho "isikhova" Uyoqeda isidingo ukuzamula emsebenzini.
ubuchwepheshe Abaningi creative ehilela amahora okungajwayelekile ukusebenza, okuyinto kuleli cala kungenziwa ngokuthi indlela yokuphuma. Rape ngokwayo, ephoqa ukwenza okuthile ezingezona ezemvelo emzimbeni, asikho isidingo.
Kodwa uma "isikhova" kini ngengqondo kuphela, abaqeqeshiwe, khona-ke thatha inhliziyo futhi senza wonke amathiphu ngenhla, ukuqala impilo entsha nge entsha, ekuseni.
10 izinto oyisiphukuphuku ezikwenza alithandeki emehlweni abanye
Emaceleni okuhlobisa ezivalweni - enye esikhundleni inketho
Iyini izithelo ezifakiwe futhi ziyadla ini?
Ukukhetha vacuum cleaner "Samsung" nge aquafiltering